Lego BrickHeadz Minions ၄၀၄၂၀ Gru၊ Stuart နှင့်အော့တိုပြန်လည်သုံးသပ်
26 / 04 / 2021 26 / 04 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 701 Views စာ0မှတ်ချက် ၄၀၄၂၀ Gru Stuart နှင့်အော့တို, BrickHeadz, မျှော်စင်ချီစက်, Lego, Lego BrickHeadz, Lego Minions, Lego Minions: Gru ၏ထ, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego သုံးသပ်ချက်များ, Minion ပါ, Minions, Minions: Gr ၏ထ, Minions: Gru ၏ထ, ဆန်းစစ်ခြင်း, reviews
Universal ရဲ့ Minions နှင့်အတူလူ့အဖွဲ့အစည်းသူတို့ရဲ့နှေးကွေးအာဏာသိမ်းမှုကိုဆက်လက် ၄၀၄၂၀ Gru၊ Stuart နှင့်အော့တို, အသစ်စက်စက်ဖြည့်စွက် Lego BrickHeadz အကွာအဝေး။
မူလက Despicable Me, Illumination မှလာသည် Minions ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှစ၍ လူများစွာ၏စိတ်ထဲတွင်သူတို့ကိုယ်ကိုထည့်သွင်းလာခဲ့သည်။ BrickHeadz ဇာတ်ကောင်တွေနောက်ဆုံးမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီနောက်ဆုံးပေါ်တည်ဆောက်မှုတွေကစုဆောင်းထားတဲ့ပုံစံနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ရုပ်ပုံတွေထဲကသေးငယ်တဲ့အစုတခုကိုဖန်တီးပေးနိုင်သလား၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကတကယ်စက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာလား။
theme: Lego BrickHeadz အမည်သတ်မှတ်မည် - ၄၀၄၂၀ Gru၊ Stuart နှင့်အော့တို ဖြန့်ချိ: ဧပြီလ 26, 2021
စျေးနှုန်း: £ 17.99 / $ 19.99 / € 19.99 အပိုင်းပိုင်း: 244 အသေးစားပုံများ: 0
အဆိုပါနေသော်လည်း Minions ဒီဂိမ်းကိုနာမည်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Steve Carrell's Gru ကနှာခေါင်းနှင့်မီးခိုးရောင်ပဝါကလွှမ်းမိုးထားသည့်အငယ်စားဗားရှင်းဖြင့်စတင်သည်။ ထိုနှစ်ခုလုံးကိုဤနေရာတွင်အလုံအလောက်ကိုယ်စားပြုထားသည်။ သို့သော် st အဘို့artသတ်မှတ်ချက်အတွက်အချက်အမှတ်၊ အခြားအရာများနှင့်လုံးဝမတူပါ BrickHeadz နှင့်မော်ဒယ်များ၏သုံးတစ်ခုကံမကောင်း uninspired နိဒါန်းအဖြစ်ကိုဖြတ်ပြီးလာပါတယ်။
အစုံရှိအခြားဇာတ်ကောင်နှစ် ဦး သည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ သငျသညျကျောက်အောက်မှာနေထိုင်ခဲ့မဟုတ်လျှင်, သင်သိလိမ့်မယ် Minions ရိုးရှင်းသော်လည်းအထင်ကရဒီဇိုင်းရှိပြီးအဝါရောင်အသားအရေနှင့်အပြာရောင်ခြုံငုံ။ ဆလင်ဒါပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဤသည်ဖွဲ့စည်းပုံသည်သူ့ဟာသူအလွန်သင့်လျော်သောတွေ့သောအရာတစ်ခုခုသည် BrickHeadz Format နှင့်ဤအဆုံးစွန်သောအက္ခရာနှစ်ခု၏ချွန်ထက်သောအရောင်များသည် Gru ထက် ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။
Stuart သူသည်မျက်လုံးတစ်လုံးတည်းနှင့်မျက်လုံးတစ်ထည်နှင့်သူ၏ခေါင်းကိုအလှဆင်ထားသောအပြာဆံပင်များပါ ၀ င်သည့်အဝါရောင် fiends နှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ အတွင်းပိုင်းတည်ဆောက်မှုသည်အများအားဖြင့် ၃ × ၃ ၏ခေါင်းများကိုဆန့်သည် BrickHeadz များသောအားဖြင့် monotonous တည်ဆောက်မှုကိုခေတ္တရပ်နားသည်။ အော့တိုသည် ၄ ​​× ၄ အုတ်ပုံစံနှင့်ဆင်တူသည့်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူခေါင်းတစ်လုံးပေါ်ရှိဆံပင်တစ်ချောင်းချင်းစီကိုလှုပ်ခါလိုက်သည်။ ရိုးရှင်းသော်လည်းကြော့ရှင်းစွာပေါင်းစပ်ထားသည်။
အစုထဲ၌အသေးအဖွဲပုံစံများမပါ ၀ င်သော်လည်း၊ အက္ခရာများ၏မီးမောင်းထိုးပြထားသည် BrickHeadz Stu အဖြစ်ဆောင်ပုဒ်art နှင့် Otto တွဲဖက်သည့်မည်သည့်စင်ပေါ်တွင်မဆို၊ ကြည်လင်ပြတ်သား။ blocky ၏မီးခိုးရောင်မျက်မှန်များနှင့်ကိုက်ညီသောထူးခြားသောမျက်လုံးပုံစံ Minions.
အရှိဆုံးသည်အခြားအစုံလိုပဲ BrickHeadz အဓိကကတော့တန်ဖိုးတစ်ခုသည်သင်ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းတစ်ခု၏ပရိတ်သတ်မည်မျှရှိသည်ကိုဘာသာရပ်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ Minions။ စျေးနှုန်းတစ်ယူနစ်အချိုးအစားသည်မျှော်လင့်ထားသကဲ့သို့မကောင်းသောအရာမဟုတ်ပါ။ စုစုပေါင်းပုံနှိပ်ထားသောအပိုင်းသုံးပိုင်း - နှစ်ခုသည်သီးသန့်ဖြစ်ပြီးအခြားတစ်ခုမှာတစ်ခုသာရှိသည် - တန်ဖိုးအတွက်လုပ်ရမည့်အငြင်းအခုံရှိသည်။ သို့သော်သင်က denim-clad ဇာတ်ကောင်မည်မျှပေါ်လာသည်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ (နှင့် Gru) ။
တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးသွားရင်သင်ဝယ်တော့မယ် ၄၀၄၂၀ Gru၊ Stuart နှင့်အော့တို ဇာတ်ကောင်နှစ် ဦး အတွက်စတိဗ် Carrell ၏ Gru သည်အမှတ်ရစရာနှင့်စွဲမှတ်ဖွယ်ဖြစ်ရန်ပျက်ကွက်ရုံသာဖြစ်သည် Minions။ တည်ဆောက်ခြင်းအဘယ်သူအားမျှ p ဖြစ်ကြသည်နေစဉ်artဆိုးကျိုးများအားလုံးသည်အော့တိုနှင့်စတူးတို့၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ထူးခြားသောလက္ခဏာများရှိသည်art Gru ထက်ပိုပြီးအရောင်အသွေးစုံလင်၊
သငျသညျ၏ပန်ကာနေလျှင် Minions ထို့နောက်မည်သည့်စားပွဲ၊ စင်သို့မဟုတ်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုရွေးချယ်ရန်အတွက်အဓိကဇာတ်ကောင်တစ် ဦး နှင့်ချစ်စရာကောင်းသောလမ်းဘေးနှစ်ချောင်းတို့ဖြင့်သင်သုံးမော်ဒယ်များကိုစိတ်ပျက်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်မင်းကကမ္ဘာကြီးကိုစွန့်စားမယ် BrickHeadz Universal ၏ blockbuster ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်ကဘာမျှမသိခဲ့ပါ၊ ထို့နောက်ပိုမိုကောင်းလာနိုင်သည် Lego အဲဒီမှာရွေးချယ်စရာများ။
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego Minions or BrickHeadz ကျွန်တော်တို့ရဲ့တ ဦး တည်းမှတဆင့်သတ်မှတ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
LEGO တည်ဆောက်ရန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ BrickHeadz Minions ၄၀၄၂၀ Gru၊ Stuart နှင့်အော့တို?
ဒါကဖြစ်ပါသည် BrickHeadz set, ဒါကြောင့်သင်ကရှည်တည်ဆောက်မမျှော်လင့်သင့်ပါတယ်။ ဇာတ်ကောင်သုံးယောက်လုံးအတွက်စုစုပေါင်းအချိန်သည်မိနစ် ၂၀ ခန့်ကြာပြီး၎င်းသည်အခြားလှုပ်ရှားမှုများအကြားအတူတကွစုစည်းရန်ကောင်းသော၊
Lego ထဲမှာဘယ်လောက်အပိုင်းအစတွေရှိလဲ BrickHeadz Minions ၄၀၄၂၀ Gru၊ Stuart နှင့်အော့တို?
၄၀၄၂၀ Gru, stuart နှင့် Otto ပုံနှိပ် p အပါအဝင်အပါအဝင် 244 အုတ်, ပါဝင်သည်arts: denim အိတ်ကပ်နှစ်ခု; Stu တစ်ခုartဆံပင်; ဂruရဲ့ရှပ်အင်္ကျီအတွက်တစ်ခု; နှင့် round round tile ပေါ်တွင် Draconic ဒီဇိုင်းအတွက်နောက်ဆုံး။
Lego ဘယ်လောက်ကြီးလဲ BrickHeadz Minions ၄၀၄၂၀ Gru၊ Stuart နှင့်အော့တို?
သူတို့ရဲ့ခြေစွပ်နှင့်တကွ, အသီးအသီး BrickHeadz အကျယ် ၅ စင်တီမီတာ၊ အနက် ၅ စင်တီမီတာရှိသည်။ အမြင့်တစ် ဦး ချင်းစီသည် Gru သည် ၉ စင်တီမီတာအောက်သာရှိသည် Minions 7cm အောက်မှာမှာလာမယ့်။
Lego ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ BrickHeadz Minions ၄၀၄၂၀ Gru၊ Stuart နှင့်အော့တိုကုန်ကျ?
၄၀၄၂၀ Gru၊ Stuart နှင့်အော့တို ယင်း၏သူချင်းကိုက်ညီ BrickHeadz သုံးဆ - အထုပ် - အပါအဝင် 40421 Belle အောက်, ကီဗင်နှင့် Bob - £ 17.99 / $ 19.99 / € 19.99 မှာ။ အကယ်၍ Minions မင်းရဲ့အရာပဲ၊ မင်းအဲဒီဈေးနှုန်းနဲ့မယှဉ်နိုင်ဘူး
← Rammstein အားကစားကွင်းသည် LEGO တွင်မဲ ၁၀၀၀၀ အထိရရှိသည် Ideas တစ်ပတ်တည်းမှာပဲ
အွန်လိုင်း LEGO Mosaic Maker ဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ပုံတူကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း →